Ngwaọrụ 4 kachasị mma iji hazie foto gallery gị | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Ngwa gam akporo, Foto, Nkuzi
N'ozuzu, Ndị ọrụ gam akporo na-enwekarị ọtụtụ foto na gallery anyị. Ihe nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu mgbe ụfọdụ. Ebe ọ bụ na ọ naghị adịrị anyị mfe ịchọta foto mgbe anyị na-achọ ya ma ọ bụ na ha anaghị edozi nke ọma. Ya mere, anyị nwere ike ịchọ enyemaka na nke ahụ. Luckily anyị nwere ngwa na-enyere anyị aka ịhazi gallery.
Ekele maka ngwa ndị a maka gam akporo anyị ga-enwe ike ịhazi foto foto n'ụzọ dị mfe. Yabụ, anyị nwere ike ịchọta foto mgbe anyị na-achọ ya. N’enweghị mgbaghasịsị, ezi nhọrọ maka ndị kacha gbasasịa bụ ndị chọrọ enyemaka n’akụkụ a.
Anyị nwere nnọọ ole na ole ngwa dị maka gam akporo igwe nke na-enyere anyị aka ịhazi foto foto anyị. Ndị anyị na-egosi gị n'okpuru bụ ụfọdụ nhọrọ zuru oke ma pụta ìhè nke anyị na-achọta ugbu a. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Kedu ngwa egwu mere listi anyị?
1 Foto Google
3 Osisi ngwa ngwa
4 F-Kwụsị Media Gallery
Anyị na-amalite na ihe nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka ndị ọrụ gam akporo. Nkechie bụ ngwa arụnyere dị ka ọkọlọtọ na ọtụtụ gam akporo igwe. O nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị dị. Ọ na-apụta n'ihi na a na-emelite ya ọtụtụ oge na ọtụtụ ọrụ ọhụụ, yabụ na ọ na-agbanwe oge na-adịghị anya. Ihe bụ ihe ọzọ, na-enye anyị ohere ịme nnomi efu na igwe ojii. Ngwa ahụ na-eji ọgụgụ isi ya edozi foto ma mepụta edemede. Ya mere onye ọrụ enweghị ike ime ihe ọ bụla na nke a. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịmepụta ọba, vidiyo ma ọ bụ ihe njikọ na ngwa ahụ. Nhọrọ zuru oke.
La na nbudata a ngwa n'ihi na gam akporo bụ free. Ọzọkwa, enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime ya.
Nke abuo, anyi huru otu n'ime nhọrọ siri ike karị dị ugbu a maka ndị ọrụ gam akporo. Ọ bụ ezie na ọ pụtara maka bụrụ ngwa nke lightest (ọ dị obere taa 12 MB). Anyị nwere ike ịkpado foto nke mere na a na-ahazi ha ahazi. Ya mere, anyị mepụtara akara mmado anyị chọrọ ka ọ dịrị anyị mfe ịchọta foto. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ngwa na-enye anyị aha mmado na ndabara. Ọ nwere ezigbo interface, dị mfe iji ma nwee ọnọdụ abalị. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere nke chedo foto na mkpisiaka ma ọ bụ okwuntughe. N'ihi ya, ọ na-echebe nzuzo nke ndị ọrụ.
La nbudata ngwa a iji hazie gallery bụ n'efu. Ọ bụ ezie n'ime ngwa ahụ anyị na-ahụ ịzụrụ.
Gbado anya - galari foto
Osisi ngwa ngwa
Otu n'ime nhọrọ kachasị mfe anyị nwere ike ịchọta, ma nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ nnukwu nhọrọ maka ndị ọrụ ahụ na-achọ ihe dị mfe, nke na-emejupụta ozi ya ma ghara ime ka ndụ anyị sie ike. Nwere folda nwere onyonyo ma hazie ha n'usoro oge. Ọ ga-ekwe ka anyị chọọ site na foto na a ụzọ dị mfe na ọ bụ na-na ngwa na-enye anyị nhọrọ iji mepụta akwụkwọ na igwe ojii. a dị nnọọ mfe imewe na ala iji. E kwesịkwara ịkpọ ya na ọ bụ ngwa dị mfe.
La na nbudata a ngwa n'ihi na gam akporo bụ free. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụta n'ime ya.
Osisi foto - QuickPic
F-Kwụsị Media Gallery
Anyị na-ejedebe na nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị nke na-apụ apụ maka oke zuru oke. Ọ bụ ngwa nwere ike ịmata metadata nke ọ bụla oyiyi gbanwetụrụ site na ngwa ndị ọzọ. N'ezie, ọ bụ naanị otu gam akporo nwere ike ime nke a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị ekepụtara aha nke klaasị ọ bụla na ngwa ọzọ, anyị nwere ike idobe ha na nke a. Ya mere, ọ na-agbanwe nke ọma n'ụzọ anyị si ahazi ihe oyiyi n'oge niile. Ọ na-enye anyị ike ịhazi foto na folda ma ọ bụ n'usoro oge. Ọ dị mfe iji nhọrọ.
Nbudata ngwa a maka gam akporo n'efu. Na mgbakwunye, n'ime ya enweghị ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi nke ụdị ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto » Ngwa Kasị Mma gam akporo iji Hazie Foto Osisi
Skype na-akwado nkwado gam akporo 4.0.3 ma emechaa